Iikhosi ezi-4 eziSimahla zeMasters kwiKhosi eneZatifikethi 2022
Iikhosi ezi-4 eziSimahla zeMasters kwiKhosi eneZatifikethi
Ngaba ujonga indlela yokufumana isidanga semasters simahla? Nasi isikhokelo esibonisa ezona zifundo zasimahla zesidanga kwi-intanethi kunye nezatifikethi ezinikezelwa ziiyunivesithi ezaziwayo nezaziwayo ukuba ungasifaka isicelo.
Kwibhidi yenkqubela phambili yomsebenzi, isidanga senkosi yinto yokuqala eza engqondweni kwaye kunjalo kuba ibonakalise ukuba sisixhobo esinamandla okanye isidanga esithatha ulwazi lwakho, izakhono, kwaye ngokubanzi, ikhondo lomsebenzi ukuya kwinqanaba elilandelayo. Ngokukodwa ngoku izidanga zesidanga sokuqala ngoku ziphathwa 'njengesiqhelo'.
Kukho izizathu ezininzi zokuba abantu bafune isatifikethi se-master's degree, inokuba zizizathu zomntu, ukufumana isikhundla emsebenzini, ukuqala ishishini elitsha okanye ikhondo lomsebenzi, ukuqeqeshelwa ngakumbi, ukunyuka kwinqanaba lezemfundo, njl.
PHAWULA: Ngelixa ulapha, kufuneka wazi nokuba zikhona izikolo ezikuhlawulayo ukuba ufunde nazo kwi-intanethi.
Isizathu sokufumana isidanga asipheli kodwa kubaluleke ngokulinganayo kuba ugqibe kwelokuba uqhubeke nemfundo yakho kwaye uthathe naziphi na iikhosi zesidanga senkosi zasimahla endizakudwelisa kungekudala ziya kunceda ekuqhubeleni phambili nomsebenzi wakho kwaye nangaphezulu, ufumana isatifikethi emva kokugqitywa.
Ewe, kunomdla ukuqhubela phambili nomsebenzi wakho kodwa kunokuba luxinzelelo kwaye kubize kakhulu kwaye umntu kwihlabathi langoku akalufanelanga uxinzelelo okanye achithe imali eninzi, hayi ngezinto ezintsha kunye nenkqubela phambili yetekhnoloji eyenzelwe ukwenza ubomi bube lula kwaye bungabizi kakhulu. .
Ekwenzeni ubomi bube lula kwaye azibizi kakhulu, olu tshintsho kunye nokuqhubela phambili kwezobuchwepheshe kube negalelo elikhulu kwicandelo lezemfundo kwaye ngoku ungafumana nasiphi na isidanga kwi-intanethi, isidanga se-master esibandakanyiweyo, kwindawo ephantsi yoxinzelelo kunye neengcebiso ezininzi kunye nezifundo kwaye azibizi kakhulu ngale ndlela.
Malunga neMigangatho yeeMasters ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi
Izibonelelo zeKhosi yeziDanga zeMasters kwi-Intanethi ezineZatifikethi
Izidingo zokungeniswa kwiSidanga se-Intanethi se-Intanethi
Nguwuphi umahluko phakathi kwesitifiketi se-Intanethi kunye nesidanga semasters?
Ngaba zikhona izidanga zasimahla ezikwi-Intanethi?
Ndingasifumana phi isidanga semasters simahla?
Iindawo onokufumana kuzo isiDanga seMasters simahla
Izifundo zasimahla ezikwi-Intanethi zeMatriki ezineZatifikethi
Inkqubo yeMIT yeLebhu yeMithombo yeendaba kwiBugcisa bezoNzululwazi kunye neSayensi
I-Curtis Institute of Music, Master of Music
IYunivesithi yaBantu Inkqubo ye-MBA kuLawulo
IYunivesithi yaBantu abaPhezulu bezeMfundo
Ukufunda nge-Intanethi lolunye lolona tshintsho lukhulu kunye nolona luhle kakhulu olwenziwe licandelo lezemfundo ixesha elide, ndiyangqina ukuba icandelo lenze umsebenzi olungileyo wokusebenzisa ubuchwephesha bedijithali bale mihla kwaye iziphumo ziluncedo olugqithisileyo.
Endaweni yokujikeleza ujikeleza ezikolweni kwaye ujongane noxinzelelo kunye nokuphazamiseka, usenokufunda nantoni na oyifunayo, ufumane isidanga osikhethileyo, kubandakanya nezifundo zasimahla ze-masters kwizatifikethi zokuthuthuzela ikhaya lakho ngekhompyuter yelaptop / desktop. okanye i-smartphone kunye noxhumano lwe-intanethi.
Ukudalwa kwe amaqonga okufunda online ngomnye nje wamagalelo aphambili athe ubuchwephesha bale mihla bawenze kwindawo yemfundo kunye nezinto ezintsha ezinje ngale kwenzelwe ukuba wonwabele wonke umntu, yiyo loo nto amanye amashishini, imibutho kunye neefemu zala maxesha zikhetha ukuqesha abantu abanobuchule, ulwazi kunye needigri. ngokufunda kwi-Intanethi.
Ngamafutshane, abaqeshwa bale mibutho bakholelwa ukuba unokulusebenzisa olo tshintsho kwaye usenokufunda, uya kuba nakho ukuqonda ukuba kubaluleke kangakanani na ubuchwephesha bale mihla kunye nezinto ezintsha ezinokuba negalelo kwimpumelelo yombutho, kwishishini okanye kwifemu.
Kwimeko yokufunda kwi-Intanethi, esebenzisa i-intanethi ukufundisa nokuxhobisa abafundi ngezakhono eziyimfuneko nolwazi nokuba uphi emhlabeni. Umzekelo, unokuba eMalaysia kwaye fumana i-intanethi Isatifikethi sematriki kwiYunivesithi yaseStanford okanye ukuba unomdla wokufumana isatifikethi seshishini ungasifumana Isikolo seshishini saseHarvard kwi-intanethi kanye entofontofo yekhaya lakho okanye naphi na apho ukhululekile ngokwaneleyo ukuba ungafunda.
Ngapha koko, amaziko akumgangatho wehlabathi amkele ubuchule bokufunda kwi-Intanethi kwaye kule minyaka ivelise izidanga ezikrelekrele apho abanye baye bangena kubasebenzi ngezikhundla ezingcono kwaye abanye bakwazile ukuqala amashishini amatsha aphumeleleyo.
Inokumangaliswa kukwazi oku kodwa ungayithatha iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezibonelelwa ngamaziko e-Ivy League, ewe kwa-Izikolo ze-Ivy League eziziwayo ezaziwayo, phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo emhlabeni, zibiza kakhulu kwaye zikhuphisana kakhulu ukungena, nabani na ovela nakweyiphi na indawo yehlabathi angathatha iikhosi ezikwi-Intanethi abazinikelayo ngaphandle kokuhlawula i-dime.
Ukufunda nge-Intanethi ngokubanzi kunezibonelelo kodwa njani malunga nezibonelelo zokufumana isatifikethi semasters kwi-intanethi, nam ndiza kuzixoxa.
Ngokungafaniyo nomfundi oqhelekileyo wesikolo ekufuneka aye kwigumbi lokufundela yonke imihla, kwisidanga se-master online, unokufunda ikhosi efanayo kwaye ufumane izakhono ezifanayo, ubuchule, kunye nolwazi oluvela kubutofotofo bekhaya lakho okanye naphina apho kubonakala kukhululekile ukuba ufunde. .
Idigri ye-master ekwi-intanethi inexabiso eliphantsi kwaye iyafikeleleka ngakumbi xa ithelekiswa neenkqubo ze-master master ngaphandle kweintanethi.
Iinkqubo zesidanga senkosi ye-intanethi ziyaguquguquka nto leyo ethetha ukuba ufunda ngethayimthebhile yakho.
Ukuba bhetyebhetye kwesidanga se-intanethi kuyivumela ukuba ingachaphazeli ngokupheleleyo imisebenzi yakho yemihla ngemihla, abanye abantu bade baqeshwe ngelixa befundela isidanga se-master kwi-intanethi.
Emva kokugqitywa, izibonelelo ziyafana nesidanga senkosi yemveli.
Ngasentla ezinye zezibonelelo eziphambili ezinxulunyaniswa nokufumana isidanga se-intanethi.
Kukho iimfuno ezithile ezifunekayo ukuze uqalise iinkqubo zesidanga se-intanethi kwaye ezi mfuno ngokubanzi, kodwa qhagamshelana neziko lakho lokubamba ukuze wazi ngakumbi, kwimeko apho.
Ukwenza isicelo sayo nayiphi na inkqubo ye-intanethi ye-master degree, abafake izicelo kufuneka bayigqibe inkqubo yesidanga sokuqala.
akho isidanga sebhatshela Isatifikethi siya kuba yinxalenye yenkqubo yesicelo sokwamkelwa kwaye kuya kufuneka uyingenise ngexesha lesicelo.
Ngelixa amanye amaziko akwi-intanethi anokufuna i-GPA ethile kwindawo yokufunda, amanye amaziko akwi-intanethi akayifuni, ngoko ke kuya kufuneka uqhagamshelane neziko lakho elikwi-intanethi ukuze ubuze malunga noku.
Ezinye izikolo ezikwi-intanethi zinokucela okanye zingawaceli amanqaku e-GRE okanye e-GMAT kwisicelo sakho senkosi ekwi-intanethi, kuya kufuneka ujonge kwiziko lakho elinomkhosi ukuze uqiniseke ngokuqinisekileyo.
Gcwalisa ifomu yesicelo sesidanga se-master kwi-intanethi ngokuchanekileyo, uqinisekise amangenelo akho phambi kokuba uwangenise.
Isatifikethi semasters esikwi-intanethi kunye nesatifikethi semasters senkcubeko yemveli efanayo ukuba sifunyenwe kwiiyunivesithi zamazwe aphesheya ezaziwayo. Banokukusa bobabini kwiindawo ezifanayo kwaye banokwamkelwa kwihlabathi liphela.
Lo mbuzo okanye endaweni yoko isiphithiphithi sityhalele abaninzi abafuna ukufumana izatifikethi zabo kwi-Intanethi ukuba bayiphephe imfundo yemveli kuba becinga ukuba isatifikethi esikwi-Intanethi asiyonyani njengaleyo sifunyenwe kwisikolo esiqhelekileyo.
Akukho mahluko phantse phakathi kwesidanga se-Intanethi kunye nesidanga semasters, inye kuphela ifunyenwe kwi-Intanethi kwaye enye ayisiyiyo. Inye kuphela into onokuhlala ujonga kuyo ukuba ngaba isidanga esikwi-Intanethi siyakwamkelwa kwaye samkelwe kwilizwe lakho.
Ke, oku kudideka kucinyiwe lixesha lokuba ndibuyele kwisizathu sokuqala seli nqaku. Ndidwelise apha ngezantsi inani lezifundo zeedigri zemasters ezinikezela ngokukhethekileyo kwi-Intanethi simahla ziiyunivesithi zamazwe aphesheya ezaziwayo.
Ewe zininzi iidigri zasimahla ezikwi-Intanethi kwizifundo zesidanga sokuqala, iinkosi kunye nePh.D. iinkqubo. Njengokuba kunjalo, iNkqubo ye-Intanethi yasimahla kubuGcisa beSayensi kunye nezeNzululwazi nge-MIT igubungela iinkosi zombini kunye nePh.D iinkqubo zonke mahala!
Ngapha koko, ukugxila kwam kweli nqaku ikakhulu kwizidanga ze-masters ezifumaneka simahla zabafundi abavela kwihlabathi liphela kunye neenkcukacha zabo zesicelo.
IYunivesithi yaBantu yenye yeendawo onokufumana isidanga senkosi yasimahla. Iyunivesithi yeyokuqala kunye neyaseMelika kuphela eyunivesithi eyamkelweyo ekwi-intanethi enemfundo yokufunda yasimahla. I-UoP iqhuba zonke iinkqubo zayo, amabhaso, kunye nazo zonke izatifikethi zayo zesidanga ngokukodwa kwi-Intanethi.
Ukulandela uluhlu lwethu lweenkqubo zesidanga semasters apha, ngezantsi ziindawo onokufumana kuzo isidanga semasters simahla;
I-Curtis Institute yoMculo.
Zonke ezi zifundo zasimahla zesidanga se-masters kunye nezatifikethi zinokufumaneka kwi-Intanethi nakweyiphi na indawo kwaye zonke zisimahla. Unokufumana iinkcukacha kunye neekhonkco zesicelo kwezi nkqubo zingezantsi.
Le nkqubo yikhosi yasimahla ye-masters degree ekwi-intanethi enezatifikethi ezinikezelwa yiMassachusetts Institute of Technology (MIT), le nkqubo yamkela abagqatswa abangama-50 ngonyaka ngamnye bebaxhobisa ngezakhono zokwenza kunye nokuyila izixhobo ezitsha zokuziqhelanisa nokwandiswa kwabantu eziza kunceda ekuphuculeni ubomi.
Iikhosi zeLebhu yeMedia zijongana nonxibelelwano, uyilo, ukufunda, ukusebenzisana kwabantu kunye neekhompyuter kunye nokushishina kunye nabafundi abafaka izicelo zalesi sicelo ukuze baphonononge konke oko kunye nokunye.
Ukufaka isicelo sale nkqubo yenkosi ye-intanethi yasimahla, abafaki zicelo kufuneka babe nolwazi olusisiseko oluluqilima kwisayensi yekhompyuter, ipsychology, ulwakhiwo, i-neuroscience, ubunjineli boomatshini, kunye nesayensi yezinto eziphathekayo. Amanqaku e-GRE awafuneki kodwa i-TOEFL iyafuneka kwabo bangengabo abo bathetha isiNgesi.
Zonke izicelo kubandakanya iileta ezintathu zokucebisa kunye neempendulo ezivela kumaziko adlulileyo zonke ziya kungeniswa kwi-Intanethi.
I-Curtis Institute of Music ibonelela ngesifundo se-masters simahla kwi-intanethi ngesatifikethi somculo, iziko lamkela kuphela malunga ne-4% yomenzi wesicelo opheleleyo oyenza inkqubo ekhetheke kakhulu.
Ukufaka isicelo, abafaki zicelo zemfundo enomsila bafuna ubuncinci beekhredithi ezingamashumi amathathu anesibini kwaye kufuneka babe nesidanga somculo okanye bathathe okanye baphicothe ubuncinci ikhosi enye kuncwadi, idrama, ubugcisa, imbali, ulwimi lwangoku kunye nezifundo zomculo.
Amanqaku e-GRE okanye e-GMAT ayimfuneko ukufaka isicelo sale nkqubo kodwa izithethi ezingezizo ezomthonyama zesiNgesi ziyafuneka ukuba zithathe i-TOEFL ngamanqaku angama-79 kunye nama-80.
Ulawulo lwezoShishino kuLawulo yinkqubo yasimahla ye-intanethi enesitifiketi esibonelelwa yiDyunivesithi yaBantu, le nkqubo ithatha iinyanga ezilishumi elinesihlanu zokufunda ngokusisigxina ukugqibezela okanye amagama amathandathu abafundi abaxakekileyo abanokuwenza ukuze balungele ishedyuli yabo ngokuthatha inxaxheba -ixesha lokufunda kwaye uthathe ikhosi enye ngekota.
Ukufaka isicelo sale nkqubo, abafaki zicelo kufuneka babonise isidanga sabo se-bachelor's degree, babe nobuchule kwisiNgesi kodwa abathethi isiNgesi abangengabo abomthonyama kufuneka babonelele ngobungqina bobuchule besiNgesi, ubuncinci beminyaka emibini yamava omsebenzi, kwaye babe nereferensi enye enokuthi ivele kumqeshi. okanye abahlohli bexesha elidlulileyo.
Amanqaku e-GMAT awafuneki ukuba uqhubeke nesicelo sakho kodwa ileta yengcebiso iyimfuneko. Onke amaxwebhu aya kuthunyelwa nge-portal yesicelo ebonelelweyo.
IYunivesithi yaBantu ibonelela ngesinye isidanga sasimahla se-masters kwi-Intanethi kwiMfundo enesatifikethi esenzelwe ukuqeqesha abafundi kwimisebenzi eguqukayo kwimfundo, ukhathalelo lwabantwana, kunye nobunkokeli boluntu.
Inkqubo inezinto ezimbini ezizodwa ezi;
Isikolo samabanga aphantsi / seSikolo esiPhakathi
Kwaye abafundi kufuneka bakhethe ukugxila kwenye yezi ndawo zingasentla.
Ngaphambi kokuba ufake isicelo sale nkqubo qiniseka ukuba unale mfuno ilandelayo;
Isatifikethi segraduate degree
Ubuchule besiNgesi, izithethi ezingezizo ezomthonyama zesiNgesi kufuneka zithathe i-TOEFL.
Akukho GMAT okanye GRE efunekayo
Onke la maxwebhu angentla kufuneka angeniswe ngombane nge-portal yesicelo esikwi-Intanethi, qalisa isicelo sakho APHA.
Apho uneenkcukacha ezipheleleyo kwezona zifundo zasimahla zesidanga se-master kwi-intanethi ezinezatifikethi kunye nesikhokelo esiyimfuneko esiya kunceda ukufaka isicelo kwezi nkqubo ngempumelelo.
Iinkqubo zonke zikhululekile ukuba zifundwe kwaye usasifumana isatifikethi esinyanisekileyo esiya kuthi samkelwe yimibutho yoluntu kunye neyabucala naphina emhlabeni.
Uluhlu lweeNyuvesi ze-Intanethi zaMazwe ngaMazwe eziSimahla
Amanqanaba aMazwe ngaMazwe aKhawulezileyo akwi-Intanethi
Iinkqubo zeDigri ze-Bachelor zexabiso eliphantsi
Iikhosi zase-Harvard zeYunivesithi zasimahla kwi-Intanethi
8 Izikolo eziBalaseleyo zoMculo eCanada
Izikolo ezili-11 eziBalaseleyo zoMculo eSingapore
Isidanga semasters simahlaisatifikethi semasters simahlaiinkqubo zesidanga semasters simahlaIsidanga se-masters simahla kwi-intanethi nesatifikethiisidanga se-intanethi
Post Previous:Iikhosi ezingama-50 zeHarvard zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi
Okulandelayo Post:I-11 yeMisebenzi yoBurhulumente obugqwesileyo ngaphandle kwesidanga
Pingback: Ungasifaka njani isicelo seDigri yeMasters e-USA yokwamkelwa okuQinisekisiweyo-KhangelaNGR
Ncedisa ii-zacarias uthi:
NgoSeptemba 11, 2021 kwi-8: 43 pm
NgoSeptemba 11, 2021 kwi-8: 42 pm
I-Gostaria de estudar cursos ligados kwi-Educação
Igqityelwe ukuhlaziywa ngeenyanga ezi-2 ngu UAdaeze Nwachukwu